Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Uyini Qeda Odume Kakhulu Wompompi Bokugeza?
2021 / 01 / 27 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 6191 0
Ngemuva kokukhetha ishawa yakho, ubhavu wakho, ize yakho, umbala wakho odongeni, ompompi bakho bokugezela bangazizwa njengemininingwane emincane. Nokho, ngokweqiniso, zingaba isiqeshana somklamo esihlanganisa konke ngempela… noma zingaphazamisa ukugeleza okubonakalayo kwegumbi lonke.
Njengoba uthenga ompompi abaphelele bendlu yakho yokugezela, kungasiza ukuqala ngezinketho ezithandwa kakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa ekugcineni kompompi. Ngakho-ke yisiphi isiphetho esithandwa kakhulu ompompi bendawo yokugezela, futhi wazi kanjani ukuthi yikuphi ukuphela okulungele wena?
Yini Okudume Kakhulu Ukuqeda Amanzi okugeza?
Ukuphendula umbuzo wesiphetho sompompi ithandwa kakhulu kuyinkohliso ngoba awukho umthombo oyedwa olandelela le datha. Ochwepheshe bonke banemibono yabo, futhi ukuthandwa ngakunye kwesiphetho nakho kuyashintsha ngokuya ngemikhuba yokuhlobisa. Abaningi bathi i-brushed nickel iyisiphetho esidume kakhulu namuhla, kanti abanye bathi yi-chrome.
Ekugcineni, nokho, okubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe isiphetho esifanelana kahle nezidingo zakho nombono wakho wegumbi. Ake siqhathanise ukuqeda okuvame kakhulu ukubona ukuthi yikuphi okulingana nendawo yakho yokugezela.
Izinketho eziphezulu zokuQedela ompompi bokugeza
Izinketho zakho zokuphela kompompi zikhuphuke kakhulu kula mashumi ambalwa eminyaka edlule. Ngaphambi kweminyaka yama-2000s, cishe yonke indawo yokugezela yayinezinto zethusi ezipholishiwe noma izinto ze-chrome. Sinezinqumo eziningi kakhulu namuhla, kepha lokho kungasho nokuthi ukuthenga kungacindezela kakhulu. Qala inqubo yakho ngokufunda ngeziphetho ezithandwa kakhulu ozothola futhi ucabangele ubuhle nobubi bazo.
Cishe uke wabona i-nickel eshaywayo kaningi, noma ngabe awuqapheli ukuthi ibizwa kanjani. Inombala ofana nowesiliva onama-undertones aphansi noma ansundu. Ibuye ibe nesiphetho se-satin ngakho-ke inikeza ukuthamba okuthambile kunokukhombisa okucacile. Kuvamile emakhaya azo zonke izitayela namuhla, kusuka e-rustic kuya kwendabuko kuya kwesimanje.
Buhle be-Nickel Ebhulashiwe
Uma ufuna indlela elula yokugqoka indlu yakho yokugezela, izakhiwo ze-nickel ezi-brushed zilungile. Isiphetho sithandwa kakhulu ukuthi uzoba nezinketho eziningi zompompi ezitholakalayo. Isiphetho siqinile futhi, ngakho-ke sithambekele ekugcineni ekubukekeni kwaso okusha okusuka ebhokisini iminyaka eminingi. Futhi, mancane amathuba okuthi umpompi wakho uzoqala ukubukeka usuphelelwe yisikhathi eminyakeni edlule.
Umthengi we-Brushed Nickel
Ngenkathi cishe yonke into yokugezela ongayifuna izongena nge-nickel ebhulashiwe, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lesi siphetho singangena ngamathoni ahlukile kusuka kubenzi abahlukahlukene. Lokhu kungenza kube yinkohliso uma ufuna ompompi bakho bahambisane nethawula lakho, umnikazi wamazinyo, ibhulashi langasese nezinye izinto.
Isihlobo esiseduze se-nickel siyi-nickel epholishiwe. Ngokuvamile inombala ofanayo ne-nickel ebhulashi kodwa enesiphetho esicwebezelayo.
Izinzuzo zeNickel Epholile
I-nickel epholishiwe kulula ukuyihlanza futhi inesiphetho esiqinile njenge-nickel ebhulashiwe. Ngokuvamile, kubantu abafuna ukwehlukanisa umehluko phakathi kwe-chrome ne-nickel ebhulashiwe, i-nickel epholishiwe iyindawo ekahle ephakathi nendawo.
Nebubi of Nickel eliphucuziwe
Ukuqedwa kweMatte ne-satin sekuthandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Ngenxa yalokhu, iningi labantu libona i-nickel epholishiwe njengokubukeka kwesimanjemanje nemfashini kune-nickel ebhulashiwe. Futhi akuvamile njengokuqedwa njengabanye abaningi kulolu hlu. Lokhu kusho ukuthi kungaba yinkohliso ukuyithola futhi uma uyithola, kuvame ukubiza kakhulu.
I-Chrome ingesinye seziphetho ezaziwa kakhulu ezungeze, hhayi kuphela igama lokuhlobisa ekhaya. Inombala ofana nowesiliva onokuphela okucwebezelayo, okucwebezelayo. Kwakuyisiphetho esithandwa kakhulu ompompi isikhathi eside, yize besiphela kancane eminyakeni yamuva.
Kumamodeli amaningi ompompi, i-chrome izoba ukuphela okungabizi kakhulu okutholakala ngoba kusabalele kakhulu futhi akubizi ukukhiqiza. Ngaphezulu kwalokhu, i-chrome iqine ngokumangalisayo futhi iyamelana nokuklwebheka, futhi kungaba isiphetho esilula ukusithola. Lokhu kwenza kube lula ukuxuba amamodeli avela kubakhiqizi abahlukene.
Kuyinhlanhla ukuthi i-chrome kulula ukuyihlanza ngoba okuphansi kwayo okuyinhloko ukuthi iveza izigxivizo zeminwe nezindawo zamanzi kalula ngenxa yokuphothula kwayo okuphezulu.
IMatte black isiphenduke isiphetho esithandwayo ngokuzizwa okunethezeka ezinkundleni eziningi, kusuka kokuhlobisa kwasekhaya kuya ezimotweni ezisebenza kuya ku-elekthronikhi. Lesi siphetho sidalwe ngokuhlukile ukuze sibe nokuthungwa okunzima ezingeni elincane. Lokhu kuvumela ukuthungwa ukuthi kuthathe futhi kusabalalise ukukhanya kunokukukhombisa.
Buhle bukaMatte Black
Ukubukeka okuhlukile, kwanamuhla kuyinzuzo ephawuleka kakhulu ye-matte black. Akubukeki nje kuphela ngokunethezeka kepha futhi kuhlukahluka kakhulu futhi, ngoba umnyama uhamba cishe nanoma yisiphi isikimu sombala wokugezela. Lokhu kuqeda kulula nokukuhlanza nokugcina.
Umthengi weMatte Black
Ukubuyiselwa emuva okuyinhloko kwe-matte black kungumaki wentengo. Abakhiqizi bayazi ukuthi ifunwa kangakanani, ngakho bayayikhokhisela imali ekhokhwayo.
I-Copper ingesinye sezengezo zakamuva ekuhlelweni kokuphela kompompi odumile, kepha kubuyiselwa emuva ezindlini zokugezela ze-retro zesikhathi esedlule. Oompompi bethusi baqala ngombala osawolintshi oshile, ukubukeka okukhanyayo kwethusi elisha. Abanye abantu bakhetha ukugcina ithusi labo ngendlela egcina ukubukeka okufanayo, kuyilapho abanye bevumela iminyaka yethusi ngokwemvelo ize ithuthukise i-patina eluhlaza eyaziwayo yasolwandle.
Ithusi ukubukeka okuyingqayizivele nokuhle, ikakhulukazi emakhaya anezitayela zokuhlobisa zezimboni noma i-rustic. Noma kunjalo, inezinzuzo zokusebenza ezithokozisayo futhi.
Kokunye, ithusi liyakwazi “ukuziphilisa” ngokwalo ngezinga elithile, imihuzuko iba mnyama ngokuhamba kwesikhathi ize ihlangane ne-patina yemvelo yethusi. Ngaphezu kwalokhu, ithusi libulala amagciwane ngokwemvelo, ngakho-ke kuyindlela ewusizo yokunciphisa ukusabalala kwamagciwane.
Nebubi of yethusi
Ithusi alikona ukuqina kompompi okuhlala isikhathi eside kakhulu. Kungenzeka "kuphulukise" imihuzuko, kepha kulula ngokungafanele ukuthi imihuzuko yenzeke kwasekuqaleni.
Ithusi futhi lingaba ukugcinwa okuphezulu uma ufuna ukugcina umbala walo wokuqala osawolintshi. Ngaphezulu kwalokhu, ithusi liyisiphetho sokukhetha okungajwayelekile kompompi bokugezela. Uma ufuna izesekeli nezinye izinto ezihambisanayo ukufanisa ompompi bakho, ungaba nesikhathi esinzima ukuzithola.
Ithusi eliphucuziwe lalithandwa kakhulu ngeminyaka yawo-1980 nango-1990. Kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1990 kanye nasekuqaleni kwawo-2000, noma kunjalo, kwabonakala kuphelelwe yisikhathi. Nokho, eminyakeni embalwa edlule, isiqalile ukubuya.
Ngombala wayo ophuzi, ofana negolide, ithusi kulula ukuzibona. Ithusi eliphucuziwe linokuphela kokucwebezela okuphezulu.
Buhle Bethusi Eliphucuziwe
Ngenxa yesheen ecwebezelayo, ithusi eliphucuziwe kulula kakhulu ukulihlanza, kufana ne-chrome. Kuvame ukuthi futhi kuhlale isikhathi eside, yize lokhu kuyehluka kuye ngekhwalithi yompompi.
Umthengi Wethusi Eliphucuziwe
Ukubuyisa izitayela ezindala kungaba yinkohliso. Ngendlela efanayo yokuthi kukhona umugqa omuhle phakathi kwe- "retro" ne- "sangomhla" emfashini, udinga ukubhangqa ithusi lakho eliphucuziwe nezinto zokuhlobisa ezifanele zanamuhla zokugezela ukuze ibukeke imfashini kunokukhathala.
Ithusi eliphucuziwe lingahle libuyele emuva, ikakhulukazi kulabo abanesitayela se-retro chic, kepha abanye abantu bakhetha umbala wethusi ngesiphetho sesimanje. Lapha kulapho kungena khona ithusi le-satin. Abanye abakhiqizi balibiza nge-brushed bronze, kodwa ngaphansi kwanoma yiliphi igama, linetoni lethusi elifana negolide elinokuningi kwe-satin sheen.
Buhle beSatin Brass
I-Satin zethusi inokubukeka kwesimanje okuyingqayizivele, futhi ingena kahle emakhaya ahlose ukubukeka okuphezulu. Ngoba ukuphela akunayo i-gloss ephezulu yethusi eliphucuziwe, akubonisi iminwe kalula.
Umthengi we-Satin Brass
Ngenkathi i-satin zethusi ikhula ngokuthandwa, ayikasakazeki kuyo yonke imakethe yokuhlobisa ikhaya. Lokhu kusho ukuthi kungaba nzima ukuthola izesekeli ezifana nezibuko kanye nemigoqo yethawula ehambelana nompompi bakho bethusi be-satin.
Insimbi engenasici ibe ngesinye seziphetho ezithandwa kakhulu kuwo wonke amakamelo endlu, kusuka emakhishini kuya ezindlini zokugezela nangaphezulu. Kubukeka kufana ne-nickel ebhulashiwe, kepha insimbi engagqwali inendawo ephansi eluhlaza okwesibhakabhaka ngenkathi amagama aphansi we-nickel ephuzi kakhulu noma ansundu. Noma kunjalo, insimbi engagqwali ingangena kahle cishe kunoma yisiphi isitayela sokugezela.
Buhle Bensimbi Engagqwali
Ngoba insimbi engagqwali ithandwa kakhulu, uzoba nesikhathi esilula sokuthola izesekeli ezifanayo nezinto zikagesi zangasese ukudala ukubukeka okufanayo.
Nebubi of Engagqwali
Insimbi engagqwali ingahle ithandwe, kepha akuyona elula. Kuklwebheka kalula. Kungaba nzima nokuzigcina uhlanzekile ngoba ayikhombisi nje iminwe ngokushesha kodwa idinga ukuhlanzwa ngezihlanzisi ezikhethekile bese isulwa ngokhula lwensimbi.
I-bronze ehlikiwe uwoyela ibilokhu ichuma kule minyaka eyishumi edlule emaphepheni okugezela nasemaphepheni asekhishini ngokufanayo. Isiphetho sibukeka sinsundu onsundu noma sicishe sibe mnyama, kepha ngamathoni athile ethusi akhanya phakathi. Imvamisa inesiphetho esinjenge-satin, futhi idume kakhulu ngamakhaya endabuko nawamarustic, kanye namakhaya ane-Tuscan aesthetic.
Buhle Bethusi Elikhuhlulwe Nguwoyela
Ngenxa yokuthandwa kwayo okwandayo, ithusi eligcotshwe uwoyela manje selitholakala cishe yonke indawo lapho ubheka khona. Lokhu kukunika izinketho eziningi zompompi ongakhetha kuzo. Ngaphezu kwalokho, ukuphela okufana ne-matte akubonisi izindawo zamanzi kalula.
Ububi Bethusi Elikhuhlulwe Nguwoyela
Akumangazi, njengoba ukuthandwa kwethusi okugcotshwa ngoyela kukhuphukile, kanjalo nentengo yayo ikhuphukile. Kuvame ukuba phakathi kwezinketho ezibiza kakhulu ompompi, ngakho-ke qiniseka ukuthi wenza isabelomali ngokufanele.
Amathiphu Wokuhlanza Izinhlobo Ezihlukahlukene Zokuqeda
Siphawule ukuthi okunye ukuqeda ompompi kulula ukuyihlanza kunezinye. Yize iningi kulula ukulihlanza, kukhona okubalulekile okufanele ukukhumbule njengoba uthenga ompompi futhi ufunda ukunakekela izinto zakho ezintsha.
Qaphela ngama-Wax kanye nama-Agents wokugcwalisa
Ama-wax namanxusa okugcwalisa asebenza ngokugcwalisa ukungapheleli okukhona kokunye okuphelile, kubanikeze ukukhanya okucwebezelayo. Ngenkathi imikhiqizo enalezi zithako ilungele ukuqedelwa okupholishiwe, qiniseka ukuthi ungayisebenzisi ukuqeda i-matte noma i-satin. Lokhu kuqedwa kubhalwe ngqo ukudala ukungabi bikho kokukhanya okukhanyayo, futhi le mikhiqizo izokwengeza ukukhanya okungadingeki ngokugcwalisa lezo zakhiwo, imvamisa ngendlela engalingani noma ehlukanisayo.
Hlanza noma yikuphi ukuqeda isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Ikakhulukazi uma unezingane, akukho okutshelwayo ukuthi yiziphi izinhlobo zezinto nezinto zokwakha ezingangena emaphepheni akho. Ezinye izinhlobo zezinto zokwakha, ikakhulukazi lezo ezine-asidi, zingaguga lapho usuqedile ngokuhamba kwesikhathi. Ukuvikela lo monakalo, sula ompompi bakho kaningi, noma ngabe usebenzisa amanzi nendwangu yokomisa kuphela.
Hlukana nokuhlanza ama-Abrasive
Kungumthetho omuhle wesithupha ukugwema ukuhlanza okweqile, kufaka phakathi amabhulashi kanye nezipanji ezinolaka, nganoma yisiphi isiphetho sompompi ukuze ungazibeki engozini yokukusikha. Kodwa-ke, lokhu kubaluleke kakhulu ekuqedeni i-nickel. I-Nickel ingadicilela phansi noma igqwale kalula uma iklwebhiwe, noma imihuzuko mincane kakhulu ukuthi awuyiboni. Ukuze ugweme le ngozi, khetha izindwangu ze-microfiber esikhundleni salokho.
Ngaphezu kwakho konke, Sebenzisa Imihlahlandlela Yokunakekelwa Kwabenzi
Ngenkathi kunemihlahlandlela ejwayelekile mayelana nokuqedwa okuthile, njengokugwema ukugcotshwa ku-nickel nokugwema ama-wax ekuqedeni kwe-matte, kunomthetho owodwa wegolide: landela imiyalo yokunakekelwa komkhiqizi wakho wepayipi.
Abakhiqizi abahlukene bangakha noma basebenzise isiphetho esifanayo ngezindlela ezahlukahlukene, ngakho-ke imikhiqizo esebenzela omunye ingalimaza enye. Ngaphezu kwalokho, uma ungayilandeli imiyalo yokunakekelwa komkhiqizi, ingavimbela iwaranti kompompi bakho.
Ukukhetha Umbhobho Wakho Wokugeza Ofanelekayo Qeda
Ekugcineni, ukukhetha kwakho kokuqeda ompompi bakho bokugeza kwehlela esitayeleni sakho kanye nesisindo sobuhle nobubi. Qhathanisa izinketho zakho nomhlahlandlela ongenhla futhi uzobe usendleleni yokujabulela ompompi abaphelele endlini yakho yokugezela. Ukuze uthole amathiphu angeziwe ngenkathi uthenga, hlola imihlahlandlela yethu yokuthenga ompompi yokugezela.
I-Chrome Bathroom Faucet Enomhlangano Wokukhipha
Edlule :: Ukwakheka kanye nenqubo yokukhiqiza ompompi abamnyama Olandelayo: Ungakuhlanza Kanjani Ukulungiswa kweMatte Black Bathroom